चियाको असर रक्सी पिउनु जस्तै ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/चियाको असर रक्सी पिउनु जस्तै !
काठमाडौं– काठमाडौं तथा देशका विभिन्न क्षेत्रमा यतिबेला वर्षा भइरहेको छ । एक त जाडो मौसम त्यसमाथि पानी परेको छ । जसले गर्दा बाहिरको मौसम निकै चिसो छ । चिसोको समयमा मानिसहरु घरबाहिर निस्कन असहज मान्छन् ।
दुःखद खबर; दाङमा क’रेन्ट ला’गेर तीन बालबालिकाको मृ’त्यु